Dhaabbanni Deenmaark Mobile App deettuu gargaaru Itoophiyaa keessatti hujiirra oolche - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Fayyaa fi Hawaasa
Walabu Media | Oromo News & Opinions
Tarkaanfiin Irreecha Finfinnee fi Arsadii irratti fudhatame qaama sabboonummaa, tokkummaa fi…
Paartii bu’uuressuuf mallattoo barbaachisuu gara 4000 ol guddisuun bibixxiilamiinsa hir’isuu mala
Manniin barnootaa 32 ol keessatti qormanni kutaa 12ffaa hatameera
Filannoof baatii 9tu hafe. Hegereen Finfinnee maal ta’uuf?
Dhaabbileen dhuunfaa (PLC) naannoleef gibira akka kaffalan murtaaye
Qabeenyi biyyattii qisaasamaa jira; Pirojeektiin Shukkaaraa Xaanaa Balas kasaaraa qarshii biliyoona…
Sheek Allaamuddiin (MIDROC) hayyamni worqii Laga Danbii akka haaromuuf gaafate
Umriin keessan 30 osoo hin gayin duroomuu feetuu? Qabxiilee saglan kanniin…
Investimentiin kubbaaniyaalee biyya-alaan Itoophiyaa keessatti godhamu %20 gadi bu’e
Ministerri Saayinsii fi Barnoota Sad Ol’aanaa raajii qabatee as baye!
Itoophiyaan Interneetii danquu fi ugguruun addunyatti sadarkaa lammaffaa qabatte
Oromiyaa keessatti barnoonni sad.1ffaa Afaan Oromoo qofaan akka kennamu murtaaye
Dargaggoonni Oromoo %77 carraa barnoota sadarkaa 2ffaa hin argatan
AllFayyaa fi HawaasaJaalala
Dhugaatiin sukkaarri itti heddummaate dhibee sukkaaraa, onneefi kaansariif balbala saaqa
Barattoonni Yunivarsiitii 16 balaa konkolaataan dhuman
Balaa tuulaa kosii Reephitti gayeen lubbuun galaafatame 65 gaye; achibuuteen isaanii…
Sa’aa dheeraadhaaf taa’uun dhibee gosa addaddaaf nama saaxila
Irreessi Hara Arsadiifi biyyoota addunyaa garagaraa keessatti bifa oo’aan kabajame
Sagaleen Oromoo Idil-addunyaa agarsiisa aadaa Toroontotti qopheessuuf
Fiilmiin Ajaa’iba jedhamu magaalota Amerikaatti daawwannaaf dhiyaatuuf
Aabbush Zallaqee istuudiyoo fiilmii Finfinnee keessatti bane
Piriimer Liigii Cheelsiin, La Liigaa Riyaal Maadriid, Shaampiyoonsi Liigii Baarseloonaan akka…
Atleet Eebbisaa Ijjiguu fiigicha Kanaadatti geggeeffame irratti Woyyaanee balaaleffate
Atleet Lammii Birhaanuu fi Atsadee Baayyisaa maaratoonii Boostan injifatan
Ganzabee Dibaabaa IAAF World Athlete of the Year jedhamte
Home Fayyaa fi Jaalala Fayyaa fi Hawaasa Dhaabbanni Deenmaark Mobile App deettuu gargaaru Itoophiyaa keessatti hujiirra oolche
Fayyaa fi Jaalala
Dhaabbanni Deenmaark Mobile App deettuu gargaaru Itoophiyaa keessatti hujiirra oolche
Dhaabbanni miti-mootummaa biyya Deenmaark, Maternity Foundation, fayyadama bilbilaa (Mobile App) deettuu gargaaru Itoophiyaa keessatti hujii irra oolchuu ibseera. Fayyadamni bilbilaa (App) kuni daa’imman nagayaan akka dhalatan akka gargaaruuf kan yaadameedha.
Fayyadamni bilbilaa ‘Safe Delivery App’ jedhamu kuni namoonni muuxxannoofi ogummaa deessisuu xiqqaa qaban itti fayyadamuudhaan dubartoota deettu akka gargaaraniif. Fayyadamni kuni akkaataa dubartii deessisuu fi daa’imman dhalatan gargaaruu irratti qajelfama suuraa, viidiyoofi barreeffamaa uf keessaa qaba. Deessistuun takka dayiinsa irratti rakkoon cimaan yoo dubatii mudate App kanatti fayyadamudhaan gargaarsa cimaafi hatattamaa laatuu dandeetti.
Dhaabbanni biyya Deenmaark fayyadama bilbilaa ‘Safe Delivery App’ uume woggaa tokkoof naannoo Oromiyaa Gimbitti yaalaa ture. Woggaa dabre keessa bilbila fayyadamni ‘Safe Delivery App’ irratti fe’ame 78’tu deessistootaaf raabsame. Fayyadama kanatti erga fayyadamuu eegalanii dandeettiin deessistoonni dhiiga deettuu dhangala’u dhaabuu %20 gara %60 ol guddateera. Bifuma wolfakkaatuun, kanniin fayyadama kanatti dhimma bayan dandeettii isaanii kan daa’imman dhalatanitti hafuura guutuu %30 gara %70’tti ol guddifataniiru.
Fayyadamni kuni biyya Gaanaa keessatti yaalamuu isaa dhaabbanni Maternity Foundation ibseera. Tanzaaniyaa fi Giinii keessatti akka raabsamuuf jiru beekameera. Kaayyoon dhaabbatichaa fayyadama bilbilaa kana deessistoota 10,000 biraan gayuudha.
Itoophiyaa keessatti ijollee kudhan keessaa sagal kan dhalatan gargaarsa ogeessa fayyaa (dessistuu leenjiteen) alatti. Gargaarsa ogeessa fayyaatiin alatti manatti ijoollee dhaluun dubartii deettuuf qofa osoo hin , nageenya daa’imman dhalataniifis rakkoo fayyaa guddaa qaba. Da’umsaan wolqabatee haadhafi daa’imman dhibee addaddaaf saxilamuun nimala. Dayiinsaa irratti, ciniinsuufi erga dayanii boodas, kanniin lubbuun dabartu heddu. Guutuu adunyaatti woggatti daya irratti daa’imman miliyoona shaniifi haawwotii 289,000 du’a. Lubbuun haawwotiifi daa’imman hedduu kan galaafatamtu biyyoota guddataa jiran kanniin akka Itoophiyaa keessatti.
Kanniin ogummaa deessisuu murtaaye qaban, bilbila ammayyaa qaban taanaan, ‘Safe Delivery App’ bilbila isaanii irratti fe’uudhaan tajaajila fooyya’aa dubartoota keenyaaf laatuu ni danda’u. Waanuma cufaaf teenyee harka faranjii laaluu hin qabnu.
Previous articleTan qaama saalaa dheeressa jettee nama ajjeeste hidhaa woggaa 5’n adabamte
Next articleBaqattummaa hanbisuuf Gamtaan Awurooppaa USD biliyoona 2 Afrikaaf laatuuf
Hawiin koo Oromoo humneessuu fi Afaan Oromoo guddisuudha. Namoonni hawwii koo qoodattanii fi waa gurra nubuusuu feetan naqunnamaa! email [email protected]
Tarkaanfiin Irreecha Finfinnee fi Arsadii irratti fudhatame qaama sabboonummaa, tokkummaa fi duudhaa Oromoo ajjeesuuti
Tarkaanfiin Irreecha Finfinnee fi Arsadii irratti fudhatame qaama sabboonummaa, tokkummaa fi...
Dubartiin takka jaalala keetiin qabamuu akkamitti beekta?
Jaalalli dhugaa qabxiilee 10 kanniin ufkeessatti ammata
Jecha sijaaladha jedhutti dhimma osoo hinbaane ergaa jaalala dabarfachuun nidanda’ama
Walabu Media LIKE GODHAA
Fayyaa fi Jaalala55
Fayyaa fi Hawaasa51
© Walabu Media 2021